တရုတ် A3 ခရမ်းလွန်ပရင်တာ, ခရမ်းလွန် Flatbed ပရင်တာ, စားနပ်ရိက္ခာပရင်တာ, ကော်ဖီပရင်တာထုတ်လုပ်သူ
 လျ：86-0755-28307302 အီးမေးလ်ပို့ရန်：refinecolor015@refinecolor.com
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Organization
ဖေါ်ပြချက်:A3 ခရမ်းလွန်ပရင်တာ,ခရမ်းလွန် Flatbed ပရင်တာ ရာပူဇော်သက္ကာကို စားနပ်ရိက္ခာပရင်တာ ထုတ်လုပ်သူ / ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, စသည်တို့ကို
USB မှ Flash ကို Disk ကိုပရင်တာ
ခရမ်းလွန် Flatbed ပရင်တာ
A4 ခရမ်းလွန် Flatbed ပရင်တာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Fast Speed ​​DTG Inkjet တီရှပ်ပရင်တာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နှစ်ချက် XP600 ပရင်တာဌာနမှူးနှင့်အတူ 6090 ခရမ်းလွန်ပရင်တာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခရမ်းလွန်ပြားပြားပရင်တာပစ္စည်းအားလုံးကို print ထုတ်နိုင်ပါတယ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CE FDA ကနဖူးအပူမီတာဒစ်ဂျစ်တယ်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
A3 flatbed ခရမ်းလွန်ဂေါက်သီးဘောလုံးကိုပရင်တာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Laptop ကိုနှင့်ပရင်တာအဘို့ကို Power Bank မှ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သန့်စင်ပြီးအရောင် TECH Co. , Ltd ကို 2015 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ဒါဟာကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်းနှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကထုတ်ကုန်: အလတ်စားနှင့်အသေးစားပုံစံ flatbed ပရင်တာ, မြင့်မားသောတိကျခရမ်းလွန်ပရင်တာ, ပရင်တာနှင့်အခြားအခမဲ့အပေါ်ယံပိုင်း flatbed LED ။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ဖြေရှင်းနည်းများ, မိုဘိုင်းဖုန်းရဲ့ shell ကို, အစားအစာ, သစ်သား, ကျောက်, သားရေ, အထည်, သတ္တု, ဖန်, ကျောက်သလင်း, acrylic, PVC, ကို ABS, TPU နှင့်အခြားပစ္စည်းများအရောင်ပုံနှိပ်ပေါ်လာ T-ရှပ်အင်္ကျီများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ကြရပြီ။ ပရင်တာစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုတည်ငြိမ်နှင့်ပိုပြီးတိကျတဲ့ positioning ကိုကြောင်းသေချာစေရန်, အနေအထားကိုအာရုံခံကိရိယာနှင့်မြင့်မားသောတိကျစိတျအပိုငျး - ကုမ္ပဏီ R & D နဲ့တစ်လောကလုံးပရင်တာ၏ထုတ်လုပ်မှု, flatbed ပရင်တာဒစ်ဂျစ်တယ်ပရိုဂရမ်းမင်း, တိအနီအောက်ရောင်ခြည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့, Multi ချမှတ်!
1. RF-A3UV / RF-A4UV က၎င်း၏လျှောက်လွှာအလွန်ကျယ်ပြန့်ဖြစ်ပါတယ် "ဟု Non-အဆက်အသွယ်" မှင်ဂျက်အမျိုးအစားဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ထည်များအပြင်၌, ခရမ်းလွန်မင်ထောက်ပံ့ထုတ်ကုန်အသုံးပြုခြင်း print ထုတ်မရနိုငျသညျ, အားလုံးနီးပါးကတခြားပစ္စည်း (မိုဘိုင်းဖုန်းအဖုံး, သားရေ, ဆိုင်းဘုတ်များ, အလင်းသေတ္တာများ, မိုဘိုင်း power supply, Flash ကိုမှတ်ဉာဏ် disk ကို, KT ဘုတ်အဖွဲ့, ကျောက်, silica gel, သစ်သား, ကြွေထည်, ကျောက်သလင်း, acrylic, PVC, ကို ABS etc) ပစ္စည်းအရောင်ပုံနှိပ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်, ခုခံဝတ်ဆင်, ခြစ်ရာခုခံနှင့်အတူညှိုးနွမ်းခုခံပြီးဆုံး။ တံဆိပ်၏စစ်မှန်သောအဓိပ္ပာယ်မရှိ, ပန်းကန်အောင်မြင်ရန်, ပြည့်စုံအရောင် image ကိုခြောက်သွေ့တဲ့ကိုလေပေါ်မှာပ။
စားသုံးဆီမှင်နှင့်အတူ 2. လွယ်ကူစစ်ဆင်ရေးကော်ဖီ / ကိတ်မုန့်ပရင်တာစီးပွားရေးပုံနှိပ်ဦးခေါင်းနှင့်အတူတစ်ဦးအိမ်လုပ်ပရင်တာအဖြစ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်, ဒါ Entry-level ကိုဖောက်သည်များနှင့်ကော်ဖီဆိုင်များများအတွက်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေးမြင့်မားပုံနှိပ်အမြန်နှုန်းနှင့်
အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်လာဖို့ပို client များကိုဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင့်အတွက်ပိုပြီးတန်ဖိုးတစ်ခုခြင်းပါလိမ့်မယ်။
3. RF-A3 Flatbed ပရင်တာပိုး screen နဲ့ပုံနှိပ်ပန်းကန်မပါဘဲ, အနက်ရောင်အနီရောင်, အဖြူရောင်နှင့်မည်သည့်အရောင်ကို T-shirt နှင့်အခြားပစ္စည်းများ, အရောင်-ပုံနှိပ်ခြင်းအပေါ်ပုံနှိပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ချိန်ကမှာပုံနှိပ်အဖြူ, gradient ကိုအရောင်ရုပ်ပုံပြီးမြောက်နိုင်ပါတယ်။ အရောင်နွမ်းနှင့်အဆင်ပြေလက်ကိုင်မရှိပါ။ ဒါဟာနိုင်ငံတကာတစ်လောကလုံးစံတွေနဲ့ညီနှင့်လုံးဝအမြင့်ဆုံးဥရောပအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်းစံမှီထားတဲ့အစိမ်းရောင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်စီဘီကိုအသုံးပြုသည်
Epson XP600 ခရမ်းလွန် Flatbed ပရင်တာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
A3 ဒစ်ဂျစ်တယ်ကို T-Shirt ပုံနှိပ်စက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
6090 ခရမ်းလွန် LED ကို Flatbed tabletop ပရင်တာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Refinecolor Latt ရေမြှုပ်ပရင်တာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
refinecolor Laptop နဲ့ပရင်တာကော်ဖီစားပွဲပေါ်မှာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရောင်းမည် Flatbed ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရင်တာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Desktop ကိုခရမ်းလွန် Flatbed ပရင်တာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
A2 ခရမ်းလွန် Flatbed ပရင်တာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
A1 ခရမ်းလွန် Flatbed ပရင်တာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အွန်လိုင်းကို Power Bank ကပရင်တာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
6 အရောင်များ Inkjet လဲမှို့အိတ်ပရင်တာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
A3 ဒစ်ဂျစ်တယ်တီရှပ်ပရင်တာစျေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခရမ်းလွန် Flatbed ပရင်တာ T ကအင်္ကျီပရင်တာ စားနပ်ရိက္ခာပရင်တာ ကော်ဖီပရင်တာ ကိတ်မုန့်ပရင်တာ A3 ခရမ်းလွန်ပရင်တာ A1 ခရမ်းလွန် Flatbed ပရင်တာ LED ခရမ်းလွန် Flatbed ပရင်တာ
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Shenzhen Refinecolor Technology Co., LTD. All rights reserved ။ မှပံ့ပိုးသည်
,ခရမ်းလွန် Flatbed ပရင်တာ ရာပူဇော်သက္ကာကို စားနပ်ရိက္ခာပရင်တာ ထုတ်လုပ်သူ / ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, စသည်တို့ကို